घर र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि चीन मिस्ट ह्युमिडिफायर निर्माण र कारखाना | केनेडे
पूर्ण मौनतामा सञ्चालन हुन्छ - बच्चा जस्तै सुत्नुहोस्! कुनै पनि गुनगुनाउँदै, सिट्टी बजाउँदैन, वा क्र्याकिङ गर्दैन यो टिकाऊ होल-हाउस ह्युमिडिफायरको रूपमा स्थिर र कुशलतापूर्वक तपाईंले चाहनुहुने सुखदायक चिसो धुवाँलाई वितरण गर्दछ। राम्रोसँग सुत्नुहोस्, राम्रो सास लिनुहोस्, राम्रोसँग बाँच्नुहोस्! तपाईंले यो वर्ष पहिले फेला पार्न चाहानुहुन्छ!
मल्टिपल मिस्ट सेटिङ्हरू + ३६० डिग्री घुमाउने नोजल - यो ह्युमिडिफायर तपाईलाई ध्यानमा राखेर सिर्जना गरिएको हो। तपाईंको वातावरण, तपाईंको आवश्यकताहरू, र तपाईंको प्राथमिकताहरू! एक सुपर साधारण कन्ट्रोल डायल र 360° घुमाउने नोजलको साथ डिजाइन गरिएको हो जसले गर्दा तपाईंले धुंधको आउटपुट र धुंधको प्रवाह दिशालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण र अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। स्वचालित बन्द - यो Humidifier बेबीसिट गर्न आवश्यक छैन। हामीलाई थाहा छ कि तपाईंले ट्याङ्की सकिनु अघि नै यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ... तपाईं यसलाई सेट गर्न र बिर्सन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहोस्!
2.5L अतिरिक्त ठूलो पानी ट्याङ्की - फिल्टर फ्री - एक लाइफटाइम वारेन्टी सुविधाहरू! एक प्रभावशाली 2.5L सुपर ठूलो पानी ट्याङ्की संग बनाइएको छ जसले तपाईंको कोठा-ह्युमिडिफायरलाई एकल फिलमा 24 घण्टा भन्दा बढि चुगिङमा राख्छ! डिजाइन गरिएको फिल्टर नि: शुल्क र जीवनभरको लागि निर्मित! यसबाट तपाईंले पाउने आनन्दमय जीवनको कल्पना गर्नुहोस्!
टप-फिलिंग डिजाइनले एयर ह्युमिडिफायर सजिलैसँग रिफिल र सफा गर्न बनाउँछ। फराकिलो खुल्ला शीर्ष मार्फत सिधै पानी ट्यांकमा सफा पानी थप्न माथिल्लो आवरण खोल्नुहोस्। यन्त्रलाई पानीले भर्नको लागि डिसेम्बल गर्न आवश्यक छैन। नोटिस: यदि एकै समयमा कुहिरो र सुगन्धको आनन्द लिन आवश्यक छ भने कृपया स्पन्ज रिंगमा आवश्यक तेल छोड्नुहोस्।
विश्वको लागि मौसम बनाउनुहोस्
अघिल्लो: पेडेस्टल फ्यान, ओसिलेटिंग फ्यान, इलेक्ट्रिक फ्यान, चिसोका लागि समायोज्य स्ट्यान्डिङ फ्यान
अर्को: केनेडेबाट रिचार्जेबल फ्यान